FIATREHANA NY VALANARETINA COVID-19 : Mbola hitombo ireo ivon-toeram-pitsaboana eto Antananarivo
Tafiditra ao anatin’ireo paikady apetraky ny Fitondram-panjakana amin’izao ady atao amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara izao ny fampitomboana ny ivon-toerana hahafahana mandray an-tanana sy manara-maso ireo marary. 28 juillet 2020
Hatreto, ivon-toerana telo lehibe no efa am-perin’asa tanteraka. Anisan’izany ny etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka, eny amin’ny CCO Ivato ary omaly ihany koa no nanomboka nandray marary ny etsy amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Mbola hitombo hatrany anefa ireo ivon-toerana ireo. Raha tsy misy ny fiovana dia amin’ity herinandro na ny herinandro ho avy io no hosokafana amin’ny fomba ofisialy ny ivon-toerana fanampiny etsy amin’ny lisea teknika Alarobia.
Ireto ivon-toerana ireto dia nomena ny anarana hoe : Ivon-toeram-pitsaboana Covid-19 na “Centre de Traitement Covid-19”. Toerana manokana handray an-tanana sy hitsabo an’ireo olona izay voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Coronavirus .
Mametraka ny fahalalahana hatrany anefa ny Fanjakana ao anatin’izany, ireo marary tsy afaka manao fihibohana any an-trano noho ny antony maro samihafa no tazomina sy arahi-maso ao anatin’ireo ivon-toerana. Izy ireo izay afaka handray marary hatrany amin’ny arivo mahery ho an’ny eto amin’ny Faritra Analamanga. Nohamafisin’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta fa tanjona apetraka ao anatin’izao fanokafana ivon-toerana izao ny hahafahana mandray an-tanana feno ireo marary.
Vonona hiatrika ny valanaretina i Madagasikara ary vonona ihany koa amin’ny fandresena izany amin’ny alalan’ny fanatanterahana ireo tetikasa maro. Ankoatra ny ivon-toerana manokana dia hampitomboina ihany koa ireo ivon-toerana fanaovana fitiliana. Tsy eto an-drenivohitra ihany fa manerana ny Faritra rehetra.
Mivoy resa-poko sy fankahalana ny filohan’ ny oniversiten’i Toamasina sy ny ekipany RAHARAHA BARIKADIMY (4736) 25 février 2021 Hivadika ho “tolona” ny tatitry ny Depiote Tim MIKATSAKA FANDATSAHAN-DRA (231) 25 février 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (143) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (139) 2 mars 2021 Handray andraikitra hatrany hisorohana izay rehetra mety ho fanakorontanana EMMO/NAT (78) 25 février 2021 « Hatao laharam-pahamehana ny fampianarana » FILOHAM-PIRENENA ANDRY RAJOELINA (70) 25 février 2021